PRIVACY STATEMENT & GDPR COMPLIANCE – shoppingdirect24.com
Home > FANAZAVANA FANAMPINY & GDPR COMPLIANCE
- Matoky izahay fa mifanaraka amin'ny fepetra rehetra mifanaraka amin'ny
Fitsipika ankapobeny (GDP)
Tsidiho ity rohy ity raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny GDPR:
- Tsy mampiasa ny angon-drakitrao ianao fa tsy ilaina amin'ny fitantanana raharaham-barotra miaraka aminao
ary noho ny fanatsarana ny tranokalanay ho an'ny fanandramanao tsara indrindra.
- Tsy mivarotra ny angon-drakitrao izahay.
- Tsy mampiasa ny angon-drakitra izahay noho ny fivarotana nataonareo na fampiroboroboana raha tsy misy ny fahazoan-dàlana mazava.
- Nanangana ny fivarotana izahay:
" Aza adino ny adiresy IP feno ary manonona ny adiresy IP rehetra ao amin'ny rafitra.
Noho ny fangatahan'ny GDPR, ny fampiharana adiresy IP dia nampiharina ho an'ny mpampiasa rehetra. "
- Mampiasa fampiharana sy fitaovana statistika izahay hamakafaka ny fifamoivoizana amin'ny famangiana fivarotana amin'ny endriny samihafa. Mariho manokana fa tsy manangona na manome ny mombamomba anao manokana ianao, toy ny anarana, adiresy, nomeraon-telefaona na mailaka, ankoatra izay omenao anao amin'ny sehatry ny fividianana vokatrao. Tsy mampiasa fampahalalana manokana manokana ho an'ny tanjona statistika izahay.
- Ny fidiran'ny antoko fahatelo na ny fampitana ny angon-drakitrao dia tsy maintsy atao na omena amin'ny antony ilàna fahalalana (ohatra amin'ny mpamatsy / mpamatsy sy mpamatsy vola) ary raha ny fitondran-tena mivantana amin'ny raharaham-barotra ihany no azonao jerena eto ambany.
Ity Politika ity dia mamaritra ny fomba famangiana, fampiasana, ary fizarana ny mombamomba anao manokana rehefa mitsidika na manao fividianana amin'ny shoppingdirect24.com (ny "Site").
Rehefa mitsiditsidika ny Site ianao dia manangona ny fampahalalana sasantsasany mikasika ny fitaovana misy anao, ka ao anatin'izany ny fampahalalana momba ny navigateur web anao, ny adiresy IP, ny zone time, ny toerana misy anao ary ny sasany amin'ireo cookies izay napetraka ao amin'ny fitaovana. Ankoatra izany, rehefa mijery ny Site ianao dia manangona vaovao momba ny pejy Internet na ny vokatra izay hitanareo, inona ireo tranonkala na teny fikarohana momba ny tranonkala, ary ny vaovao momba ny fifandraisanao amin'ny Site. Miantso ity fampahalalana voaraikitra ity ho "Informatika amin'ny fitaovana" isika.
Manangona ny fitaovana momba ny fitaovana ampiasaina amin'ireto teknolojia manaraka ireto izahay
- "Cookies" dia tahirin-tsarimihetsika izay napetraka eo amin'ny fitaovana na solosaina ary matetika ahitana mpamaritra manokana tsy fantatra anarana. Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny cookies, ary ny fomba hanilihana cookies, tsidiho ny http://www.allaboutcookies.org.
- "Fandefasana rakitra" ny fitantanana ireo hetsika ao amin'ny Site, ary manangona ny angon-drakitra, ny adiresy IP, ny toerana misy anao, ny karazana navigateur, ny mpanome tolotra aterineto, ny takelaka misy pejy / fivoahana, ary ny daty / ora marika.
- Ny "Web cycles", "tags", ary "pixels" dia rakitra elektronika ampiasaina hanangonana vaovao momba ny fomba fijerinao ny Site.
Ankoatr'izay rehefa mividy na manandramana mividy amin'ny Site, dia manangona fanazavana sasantsasany avy aminareo izahay, anisan'izany ny anaranao, ny adiresy faktiora, ny adiresy fandefasana, ny fampahafantarana ny fandoavam-bola (ao anatin'izany ny isa nomerao), ny adiresy mailaka, ary ny laharan'ny findainao. Miantso ity vaovao ity isika ho "Information Information".
Rehefa miresaka momba ny "Information personnel" isika ao anatin'ity politika momba ny fiarovana ity dia miresaka momba ny fampahalalam-baovao momba ny fitaovana sy ny filaminana.
AHOANA NO TOKONY HAMPIASA NY ANKIZY IO?
Ampiasainay ny fampahalalana momba ny Order izay anangonanay amin'ny ankapobeny mba hanatanterahana ny baiko napetraka ao amin'ny Site (anisan'izany ny famoahana ny fampahafantarana momba ny fandoavam-bola, sy ny fandefasana ny sambo, ary ny fanomezana anao ny faktiora sy / na ny fanamafisana). Fanampin'izany, ampiasainay ity fampahalalana momba ny baiko ity:
- Miresaha aminy;
- Farito ny baikon-tsika mety hitranga na hosoka; ary
- Raha mifanaraka amin'ny safidy tianao omena anay dia manome anao fampahalalana na dokam-barotra mifandraika amin'ny vokatra na ny serivisy.
Mampiasa ny Informatika momba ny fitaovana izahay mba hanangonanay hanampy anao hisafidy ny mety hisian'ny loza sy hosoka (indrindra ny adiresy IP anao), ary amin'ny ankapobeny ny fanatsarana sy ny fanatsarana ny tranokalanay (ohatra, amin'ny famoronana fanadihadiana momba ny fomba fijerin'ny mpanjifantsika sy ny fifandraisany amin'ny ny tranonkala, ary ny fanombanana ny fahombiazan'ny fanentanana ara-barotra sy ny dokam-barotra).
FAMPIHARANA NY FIFANEKENA MANOKANA
Mizara ny mombamomba anao manokana izahay miaraka amin'ny antoko fahatelo hanampy anao hampiasa ny mombamomba anao manokana, araka ny voalaza etsy ambony. Ohatra, mampiasa Shopify izahay mba hanamafisanay ny fivarotanay an-tserasera - azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ny fomba ampiasain'ny Shopify anao ny mombamomba anao manokana: https://www.shopify.com/legal/privacy. Ampiasainay ihany koa ny Google Analytics mba hanampy anay hahatakatra ny fomba ampiasain'ny mpanjifa ny Site - azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ny fomba ampiasain'i Google ny mombamomba anao manokana: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Azonao atao ihany koa ny miala amin'ny Google Analytics eto: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Farany, afaka mizara ny mombamomba anao manokana ihany koa ianao mba hanaraka ny lalàna sy fitsipika azo ampiharina, hamaly ny fangatahana, ny fanamarinana fikarohana na ny fangatahana araka ny lalàna momba ny vaovao azontsika, na ny fiarovana ny zontsika.
Araka ny voalaza tetsy ambony, dia mety hampiasa ny fampahalalam-baovao manokana anao ianao mba hanomezanao dokam-barotra mibaribary na fifandraisana ara-barotra izay inoantsika fa mety mahaliana anao. Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny asan'ny dokam-barotra kinendry ianao dia afaka mitsidika ny pejy fanabeazan'ny Network Advertising Initiative ("NAI") amin'ny http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
Azonao atao ny miala amin'ny dokambarotra voatokana amin'ny fampiasana rohy eto ambany:
Ankoatra izany, afaka misafidy ny sasany amin'ireo tolotra ireo ianao amin'ny fitsidihana ny vavahadin-tserasera Digital Advertising Alliance amin'ny: http://optout.aboutads.info/.
Efa nanamboatra fitaovana fanangona antontam-baovaon-drakitra momba ny angona isika ary ny fampiharana mba tsy hanajana ny fangatahana, raha mbola azo atao izany.
Raha olom-pirenena Eoropeana ianao dia manana zo hahazo ny mombamomba anao manokana ary hitaky ny fanitsiana, ny fanavaozana, na ny fanesorana anao. Raha te hampihatra io zo io ianao dia azafady mifandray aminay amin'ny alalàn'ny fampahalalana eto ambany.
Ankoatra izany, raha mpikamban 'ny Eoropeana ianao dia manamarika fa manitsy ny fampahalalana izahay mba hanatanterahana fifanarahana izay mety anananao (ohatra raha mametraka baiko amin'ny Site ianao), na raha te hanaraka ny tombontsoa ara-barotra ara-bola voasoratra etsy ambony. Ankoatra izany, mariho fa ny fampahalalana anao dia halefa ivelan'i Eoropa, anisan'izany i Kanada sy Etazonia.
Amin'ny fampiasana ny vohikalanay, ianao (ilay mpitsidika) dia manaiky ny hanaiky ny zon'ny olon-kafa handika ny adiresy IP anao, mba hamaritana ny toerana misy anao amin'ny tanjon'ny fiovam-bola. Manaiky ihany koa ianao fa manana izany tranokala vola voatahiry ao amin'ny session cookie ao amin'ny navigateur izany (cookie iray mialoha izay misintona rehefa manidy ny browser ianao). Manao izany izahay mba hahafahan'ilay vola voafantina hijanona sy tsy tapaka rehefa mijery ny vohikalanay mba hahafahan'ireo vidin-javatra mivadika any amin'ny (ny mpitsidika) ny vola eo an-toerana.
Rehefa mametraka baiko amin'ny Site, dia hitazona ny fampahalalam-baovao momba anao izahay ho an'ny rakitsoratra raha tsy izany ary mandra-panontany anao hanaisotra ity vaovao ity.
Azontsika atao ny manavao io politika momba ny tsiambaratelo io indraindray mba hahafahana mandinika, ohatra, ny fanovana ny fomba amam-panao na noho ny antony ara-dalàna, ara-dalàna na ara-dalàna.
Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny fomba fiainanao manokana ianao, raha manana fanontaniana hafa ianao, na te hiantso fitarainana, azafady mba mifandraisa aminay amin'ny e-mail amin'ny